Iindaba - Imakethi yevalvethi yoshishino ikwimo entle kwikota yesine
Imakethi yevalvethi yemizi-mveliso ikwimeko entle kwikota yesine
Kwiikota ezintathu zokuqala zika-2016, uqoqosho lwesizwe luqhubekile nokukhula ngokukhawuleza, ngezinga lokukhula kwe-GDP eliyi-11.5%, nelinike intengiso yevalufa yebhola imeko elungileyo. Nangona kunjalo, imeko yokufudumeza uqoqosho iyaqhubeka, kwaye kukho ezinye iingxaki ezibalaseleyo ezinokuthi ziguqule uqoqosho lube nobushushu, ekufuneka ngokungxamisekileyo ithathelwe ingqalelo. Kulindeleke ukuba umfutho wokukhula ngokukhawuleza koqoqosho kwikota yesine awuzukutshintsha. Ngokubhekisele kwishishini levalve, zininzi izinto ezinefuthe, ezifanelekileyo ukuba ziqwalaselwe.
Okwangoku, ilizwe lam linemfuno enkulu yokuhlaziywa kwevalvu kunye nohlaziyo lwetekhnoloji. Emva kweminyaka yokukhangela kunye nokuziqhelanisa nemarike, ishishini levalufa kufuneka libe lelona vulindlela linamava ekuthatheni inxaxheba kulwakhiwo. Ngokukodwa ngokusungulwa komgaqo-nkqubo wokuthengwa kwevalve yokuthenga ngo-2014, inqanaba lokuvalwa kwevalve kwilizwe lam likhuphuke ngesiquphe kwinqanaba elitsha. Umbutho we-China Valve Industry Association ubeke phambili isicwangciso sokuqala sotshintsho lobuchwephesha kumzi-mveliso woomatshini bezolimo exhaswa yimali yamatyala esizwe ngo-2008, kwaye kukholelwa ukuba inkxaso mali yamatyala esizwe izonyuswa kunyaka olandelayo.
Ukusuka kwimbono yemfuno yasekhaya, zininzi izinto ezintle, ukusetyenziswa okuphezulu kunye nokupheliswa kwetekhnoloji kunye nezixhobo, ukuthintela ukungeniswa kwetekhnoloji ephambili yasekhaya ephuhlise amandla, irhoxisa umgaqo-nkqubo wokukhululwa kwirhafu koomatshini abagqibeleleyo kunye neeseti ezigcweleyo zezixhobo, ukumilisela irhafu Inkuthazo kunye nokuxolelwa kwirhafu yezinto eziphambili, kwaye usebenzise inkuthazo yerhafu e China’s izivalo ezinzima zemigodi kunye nezivalo zobunjineli. , Izixhobo zomatshini, kunye nezixhobo zepetroleum. Ulwakhiwo lukaloliwe (kubandakanya noololiwe abahamba ngesantya esiphezulu) lukhawulezile. Utyalo-mali lonyaka ngo-2007-2010 luza kudlula kwi-yuan eyi-300 yezigidigidi, kwaye ulwakhiwo lweendlela ezintsha zasemaphandleni ziya kutyala imali engaphezulu kwe-400 yezigidigidi ze-yuan. Icandelo loshishino lwezixhobo zikaloliwe liza kudlala indima enkulu ekuqhubeni; ukuvala imigodi yamalahle amancinci kunye nokuphuhlisa amaqela amakhulu amalahle, ukwenza amaqela amalahle eetoni eziibhiliyoni ezi-5-7, njl. Ukongeza, kwiimarike zaphesheya, isiseko sokwakha izakhiwo eAfrika, eMzantsi Melika, eMzantsi Asia naseMpuma Yurophu sele iqalile, kwaye indawo yentengiso inkulu. Oku kuyakuba yintengiso ephambili yeenkampani zasekhaya zokuphonononga phesheya kolwandle kwixa elizayo.
Ukusuka kumbono wemfuno zangaphandle kunye nokufakwa endaweni, iChina’Inkqubo yokufudukela kwabantu ezidolophini isekude ukuba igqitywe, kwaye ulwakhiwo lwendawo esemaphandleni iyakhawuleza. Ukongeza, iimveliso zalapha ekhaya zobunjineli zenze inkqubela phambili enkulu ngokomgangatho kunye nenkonzo, kwaye ukutshintshwa kweempawu zangaphandle kuyaqhubeka. Ke ngoko, kulindeleke ukuba iminyaka emithathu yokuqala isengalixesha lokukhula ngokukhawuleza kwemfuno yezivalo zobunjineli.